Romance – Yourcinema
IMDB: 9.6/10 61,156 votes
Dear John ဒီဇာက်လမ်းကတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားကမ်းခြေတစ်ခုမှာ စကားပြောနဲတဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့၀င်တပ်ကြပ်ကြီး Johnနဲ့ မိန်းမချောလေး Savannahတို့တွေ့ရာရနေစပါတယ် တွေ့ရတဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ သူတို့နှစ်ယောက်က ချစ်သူ ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ် Savannahကကောလိပ်ကိုပြန်ရပြီး Johnကစစ်တပ် ထဲကိုပြန်ရမဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ခွဲရမဲ့ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဖြစ်သမျှအကြောင်းစာရေးပြောဖို့ Savannahကပြောခဲ့ပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ဆီတစ်ယောက်အပြန်လှန်ဘဲစာရေးခဲ့ကြတယ် လောကကြီးကစီစဉ်ထားသလိုသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်နှစ်အကြာမှ လက်ထပ်ဖြစ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းဘ၀ဆိုတာ ရတာမလို လိုတာမရဖြစ်တတ်သလို ဖြစ်ချင်ရာမဖြစ်ရဘဲ မဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်တတတ်တဲ့သဘောက‌လည်းရှိနေတော့ သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာ အခတ်ခဲလေးတွေရှိလာပါတယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Savannahကစာအရေးကျဲလာက‌နေ တစ်နေ့မှာတော့ သူအခြားတစ်ယောက်နဲ့စေ့စပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းစာက Johnဆီကိုရောက်လာပါတော့တယ်... Savannahကရော ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် အခြားတစ်ယောက်ကို စေ့စပ်ရတာလဲ Johnကရော ချစ်ရသူကိုစိတ်နာပြီးဘဲပြစ်ထားမလား အကြောင်းစုံသိရအောင်ဘဲ စုံစမ်းမလား... ချစ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကရော ပြန်လည်ပေါင်းဖတ်နိုင်မှာလားဆိုတာကတော့....... Translated & Review By Yamin Ou Encoded By Kar Yan
IMDB: 6.3/10 135,672 votes
Lovers Day Your Cinema ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါ အရမ်းလန်းတဲ့ LOVERS DAY ဆိုတဲ့ဆယ်ကျော်သက် ကျောင်းသား‌ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ဒီကားလေးမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက ကျောင်းသားကား ဖြစ်တာနဲ့အညီ သုံးထားတဲ့မင်းသား မင်းသမီလေးတွေ အားလုံးဟာ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လေးတွေ ဖြစ်နေတာကိုပါ။ ဒီအချက်ကဇာတ်လမ်းကိုပိုပြီး အသက်ဝင်စေပါတယ်။မင်းသား မင်းသမီးလေးတွေက အသက်ငယ်ပေမဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက တကယ်ပီပြင်ပါတယ်။ ဒီကားလေးကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်း မိမိတို့ရဲ့ငယ်စဉ် ကျောင်းသားဘဝကို ပြန်လည်တမ်းတ သတိရနေမယ်ဆိုတာ အသေအချာ ပြောရဲပါတယ်။ကျောင်းသားဘဝ မှားတက်တဲ့အမှား ပေါင်းများစွာကိုလည်း ဟာသဆန်ဆန် ဇာတ်ကွက်လေးများဖြင့် ဖော်ကျူးထားသောကြောင့် အူနှိပ်ပြီးရယ်နေရမှာလဲ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဘဝ သူငယ်ချင်းများရဲ့ ကြားမှာရှိတဲ့သံ ယောဇဉ်တွေ ၊တစ်ယောက်အခက်အခဲကိုတစ်ယောက်က ကူညီဖြေရှင်းပေးတာတွေ ၊ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းနဲ့ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကြားက သံယောဇဉ်တွေကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ကုလားကားဆိုတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက် အလှည့်အပြောင်းများကလည်း ပရိသတ်ကြီးကို ရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားစေမှာပါ ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုတော့ ဇာတ်လမ်းအရသာပေါ့သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် မပြောတော့ပါဘူး။လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ခံစားချက်ကို ခံစားချင်သူတိုင်း ...
IMDB: 5.5/10 2,065 votes
Vicky Donor Vicky Donor (2012) ကဲ Ayushmann Khurranaရဲ့နောက်တစ်ကားဗျာ... Dream Girlတို့ Article 15တို့ကို ကြိုက်ခဲ့တဲ့ပရိတ်သက်တွေကတော့ ဒီမင်းသားကို ကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်... ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသလောက် သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေ တစ်ကားမှ အပြစ်ပြောစရာမရှိလို့ပဲ... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိကောင်လေးဗစ်ကီက ပိုက်ဆံဖြုန်းရတာတော့ ဝါသနာပါတယ်ဗျ... သုံးစရာမရှိရင် အိမ်ကမွေးထားတဲ့ခွေးကိုတောင် ရောင်းစားရဲတဲ့အမျိုး... အဲ့လိုကောင်လေးကိုမျက်စိကျသွားတာက မျိုးပွားဗေဒဆရာဝန် ဒေါက်တာချန်ဒါတဲ့... ဘာလုပ်ဖို့မျက်စိကျသွားတာလဲဆို သုတ်လှူဖို့ပဲ... အဲ့တော့ ကောင်လေးဗစ်ကီကို အမျိုးမျိုးစည်းရုံးပြီး သုတ်ရည်လှူခိုင်းတယ်.. ပိုက်ဆံကိုလည်း ရှယ်ပေးတယ်... အဲ့တော့ ဗစ်ကီကသဘောကျပေါ့... အဲ့လိုနဲ့အဆင်ပြေလာပြီးမှာ ကောင်လေးဗစ်ကီအချစ်စစ်နဲ့တွေ့ပြီး လက်ထပ်သွားရော... လက်ထပ်ပြီးမှ ကြုံတွေ့လာရမယ့်အခက်အခဲတွေကဘာဖြစ်မလဲ... သူဒီလိုလုပ်ခဲ့တာကို သူမိသားစု သူ့ရဲ့ဇနီးမယားသိသွားတဲ့အခါ လက်ခံနိုင်ကြမလား... ဒေါက်တာချန်ဒါကကော ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်ကူညီဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသလေးနှောပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခံစားရမှာပါ... (အညွှန်းမရေးတတ်လို့ သိပ်မထိရောက်ဘူးဖြစ်သွားရင်တောင် စိတ်ပျက်ပြီး မကြည့်ဘဲမနေပါနဲ့... တကယ်မိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ... ဒီမင်းသားရဲ့ တခြားကားတွေလဲရှာကြည့်ကြည့်ပါ... တစ်ကားမှ ပေါ့တိပေါ့ပြတ်မပါဘူး... အကုန်ကောင်းတယ်) Genre - Comedy, Romance Translated by MinnMyoKhant Encoded by လူယုတ်မာ 1) 👉ဒေါင်းရန်နှိပ် DropBox 1080P [1.2 GB] 2) 👉ဒေါင်းရန်နှိပ် MegaUp 1080P ...
IMDB: 7.8/10 38,395 votes
Jaane Tu… Ya Jaane Na Jaane Tu Yu Jaane Na (2008) PKမင်းသားကြီး အာမီရာခမ်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုတ်ထားတဲ့အချစ်ကားလေးပါ... IMDb7.5/10ရရှိထားပါတယ်... အဓိကမင်းသားကတော့ အီမရန်ခမ်းပါ... ဇာတ်လမ်းအစမှာ သူငယ်ချင်းတစ်စု ကားကြီးစီးပြီး သီချင်းတွေအော်ဆိုနေတဲ့အခန်းနဲ့စထားပါတယ်... ပစ္စည်းတစ်ခုဟာရှိနေရင် သူရဲ့တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်သိပ်မပြုကြပါဘူး... မရှိတော့ရင်တော့ သူရဲ့တန်ဖိုးကို သိလာကြတယ်... အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်... ယောက်ျားလေးက လုံးဝရန်မဖြစ်တတ်တဲ့သူ... မိန်းခလေးကတော့ ခပ်စွာစွာလေးပေါ့... သူတို့နှစ်ယောက်သိပ်ချစ်တတ်ကြလွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မိဘတွေကတောင် ရည်းစားလို့ထင်နေတာပါ... ကောလိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ မိဘတွေကသူတို့ကိုလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ကြတယ်... အဲဒိအခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အများထင်သလိုသမီးရည်းစားမဟုတ်ပဲ အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြောင်း ပြောပြကြတယ်... ကျောင်းလည်းပြီးပြီဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ရည်းစာရှာပေးဖို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်။ကောင်းလေးကအရင်ရည်းစားရသွားတယ်... သူ့ကောင်မလေးကိုသူကသိပ်ချစ်တတ်တာ... အချိန်တွေအကြာကြီး တပူးပူးတတွဲတွဲ သွားလာနေပြီးမှ ကိုယ်သူငယ်ချင်းက သူ့ရည်းစားနဲ့ပဲ အချိန်ပေးနေတော့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးဘယ်လိုခံစားရမလဲ... သူထင်ထားသလို့ သူ့သူငယ်ချင်းအပေါ်သူတကယ်ရိုးသားရဲ့လား... ကောင်လေးကရော???????? ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ကြည့်ကြည့်ပါဗျ... (အညွှန်းကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရေးပေးပြီး ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ Maung Pyae Aye ဖြစ်ပြီး လူယုတ်မာက Encode ပေးထားပါတယ်။) 1) ဒီမှာ ဒေါင်းပါ DropBox 720P [1.6 GB] 2) ဒီမှာ ...
IMDB: 7.5/10 24,771 votes
The Dressmaker အင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ နာမည်ကြီး အဝတ်ချူပ်ဆရာမ သို့မဟုတ် တစ်သက်လုံး တစ်ကိုယ်တည်းနေပြီး တူမလေးကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ အန်တီ Nellie၊ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး လူငယ်တွေနဲ့ အပြိုင်လန်းနေတဲ့ ယောက်ျားတွေအကြောင်းနှောကျေသူ အန်တီ Margo၊ အချစ်ကို အခုမှ စတင်တွေ့ရှိမယ့် အန်တီနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်မှာပဲ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ၁၇နှစ်ရွယ်ကောင်မလေး Rita၊ ပြီးတော့ ဇနီးဆုံးပြီးကတည်းက သမီးလေးကို အန်တီတွေ လက်ထဲအပ်ထားပြီး သမီးလေးအတွက် အကောင်းဆုံးကိုပဲ လုပ်ပေးချင်တဲ့ အဖေ သို့မဟုတ် ဦးလေး Jack။ သူတို့တွေရဲ့ ဘဝထဲကို အမေရိကန်စစ်သားလေး တစ်ယောက်ရောက်လာပြီးနောက် ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲ၊ Rita ရဲ့ အချစ်လမ်းခရီးကကော ဖြောင့်ဖြူးမှာလား…….. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို 1988ခုနှစ် ဝန်းကျင်မှာ ရိုက်ထားတာ ဆိုပေမဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက အငွေ့အသက်တွေကို လစ်ဟာမှုမရှိအောင်ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ အတွက် ကြည့်ရှုသူအပေါ် ရသတစ်ခု ...
IMDB: 6.3/10 197 votes
Thangamagan Thanga Magan (2015) အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီကား​လေး က (south indian)tamil movie ပါ။ အမည်က​တော့ " သား​ကောင်းရတနာပါ" Translator ကိုယ်တိုင်ကြည့်တာ ၃ခါမက​တော့ ​တော့ပါဘူး ဒါ​ပေမဲ့ကြည့်တိုင်းရီ​နေရပါတယ်🤣၊ ရိုးလည်းရိုးမသွားဘူး။ ရီရတယ်ဆိုလို့ ဟာသကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။🤔 😀 ရသာစုံပါဝင်တယ်၊ romance(အချစ်ရသ)၊ Drama ရသ၊ action (ဖိုက်တင်)​​​တွေအပြင်၊ Friendship (သူငယ်ချင်း​တွေရဲ့ သံ​ယောဇဥ်)တွေလည်း ပါပါ​သေးတယ်။ Movie review ​​တော့ မရေး​ပေးချင်​တော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လိုလဲ့ဆို​တော့ ရုပ်ရှင်ရဲ့အရသာကို​ပေါ့ပျက်​စေတယ်။ နာမည် အတိုင်း သား​လိမ္မာ တစ်​ယောက်ရဲ့ ဘဝရဲ့​ အ​ကွေ့အချိုး​တွေကို ဖြတ်သန်းပုံကို ကို သရုပ်​ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ☺ 👱‍♀️👩မင်းသမီး​ချော​လေး ၂​ယောက်နဲ့ ​ယောက်ကျားဆန်ဆန်💁‍♂️ မင်းသားတစ်​ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ 🎶သီချင်း​🎶တွေကိုလည်း အ​ကောင်းဆုံး ဘာသာပြန်​ပေးထားလို့ ကြည့်ဖြစ်​အောင်ကြည့်ကြပါ​နော်။😀 (ဘာသာပြန်ပြီး အညွှန်းရေးပေးသူကတော့ ညီမငယ် Pwint Saple ဖြစ်ပြီး လူယုတ်မာက Encode လုပ်ပေးထားပါတယ်။) 1) ဒီမှာ ဒေါင်းပါ DropBox 1080P [920 MB] 2) ...
IMDB: 6/10 1,735 votes
The Best of Me အချစ်ဇာတ်လမ်းလှလှလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်ခံစားကြမလား အခုပြောမယ့်ကားကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ The best of me (2014) ပါပဲ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ရင် မေ့ထားလို့မရတဲ့ စာရေးဆရာကြီး Nicholas Spark ရဲ့ ရင်နင့်ကြည်နူးဖွယ် ဖန်တီးမှု‌တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ IMDb - 6.7 နဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်ရတဲ့ အပိုင်းတွေပါပေမယ့် အရမ်းကြည်နူးရပြီး အရမ်းလွမ်းမောရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ အချစ်ဇာတ်လမ်း ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး စီးမြောခံစားသွားမှ အရသာပိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ လူငယ်ဆန်တဲ့ ရင်ခုန်ကြည်နူးစရာအချစ်ရယ်၊ လူကြီးဆန်သွားတဲ့ ရင့်ကျက်လွမ်းမောဖွယ်အချစ်ရယ် ဆိုတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အချစ်ပုံစံနှစ်မျိုးကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး အချိန်နဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့် အချစ်နဲ့ ဘဝပုံစံဟာ ကွဲပြားသွား‌ခဲ့တာတောင်မှ တစ်ချိန်က ကိုယ်ရင်နင့်အောင် ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ကို အခုထိတိုင် မပြောင်းလဲသော၊ မလျော့သောခံစားချက်တွေနဲ့ ချစ်နေနိုင်သေးကြောင်းကိုလည်း မြင်တွေ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျား‌တို့ရော ...
IMDB: 6.7/10 63,989 votes
Imagine Me & You ရေချယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်လက်ထက်ပွဲတွင်း သူ့ကို ဆွဲဆောင်လိုက်သော ကောင်မလေးတစ်ယောက်.... သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနော်.... Lesbian Movies -=-=-=-=-=-=-= Translated By Phyu Phyu Aye Encoded By Kar Yan
IMDB: 6.8/10 29,080 votes
Marriage Story အခုတင်ဆက်သွားမဲ့ကားလေးကတော့ မိသားစုအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ Drama ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Scarlett Johansson ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့် သူမရဲ့ fans တွေအတွက်လက်မလွတ်သင့်တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းမှာလက်ထပ်ပြီးအိမ်ထောင်ရေး ကတော်ကဆ ဖြစ်တတ်ပုံ ကွာရှင်းလျှင်နှစ်ဖက်စလုံး ထိခိုက်ရပုံ ကလေးအတွက်ပါ ထိခိုက်ရပုံတို့ကို ဖော်ပြရန်ရိုက်ကူးထားဖြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်ကားပီပီ ဇာတ်အိမ်နက်နဲတာကြောင့် ဇာတ်လမ်းပေါ့မှာစိုးလို့အများကြီးမပြောပြတော့ဘူးနော်။ Type-Drama IMDb rating-8/10 Translated & review By Naw Suee Phaw Shee Encoded By Kar Yan
IMDB: 8/10 219,508 votes
Timeline ဒီ ဇာတ်ကားလေးကတော့ 2014 က ထွက်ရှိထားတဲ့ Timeline ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ rating ကတော့ 6.8 ရထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း တန်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို သူ့အမေက မုဆိုးမဘဝနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ သားဖြစ်သူက ဘန်ကောက်မှာ ကောလိပ်တက်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် မိခင်ဖြစ်သူက စိတ်မချတဲ့ အတွက် မလွှတ်ချင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် သားဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ ဘန်ကောက်မှာ ကျောင်းတက်စေခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းတက်ရင်း ဂျွန်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဂျွန်က သွက်လက်တက်ကြွတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ နောက်တော့ ဂျွန်က တန့်ကို ချစ်မိသွားပါတော့တယ် ။ တန်ကတော့ သူ့ကို ဂျွန်တစ်ယောက် ချစ်မိနေတာကို မသိပါဘူး။ တန်က ဂျွန်နဲ့ အမတစ်ဝမ်းကွဲ တော်စပ်သူ Orn ကို ချစ်မိနေပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း တန်က မိခင်ဖြစ်သူကို အထင်မှားတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ တန်တစ်ယောက် ဂျွန် ...
IMDB: 6.8/10 309 votes
2020 at 4:48 am
1080p Bluray 5.1 CH
1080p Bluray 5.1CH 0.2Ver
1080p Bluray 5.1CH(FHD)LQ
1280p Bluray 5.1CH
Yourcinema © 2020 All rights reserved Powered by NDK